Saraakiisha Amniga Gobolka Nugaal oo ka hadlay Xaalada Amniga Gobolka (Dhegayso) | Puntland Vision
Saraakiisha Amniga Gobolka Nugaal oo ka hadlay Xaalada Amniga Gobolka (Dhegayso)
06 December (Puntland Vision):–Waxaa maanta Magaaladan Garowe shir jaraa,id ku qabtay Saraakiisha Amaanka Ee Gobolka kaas oo ay oga hadleen xaalada Amniga guud gaar ahaan Magaalada Garowe.
Taliyaasha shirka jaraa,id qabtay ayaa waxay kala ahaayeen Taliyaha qaybta Booliska gobolka Nugaal,Taliyaha Saldhiga dhexe iyo Taliyaha Saldhiga Bari.
Faarax warsame daad ( Galangooli) Taliyaha qaybta Booliska Gobolka Nugaal ayaa sheegay xaalada Amniga gobolka inay caadi tahay balse ay jiraan dhalinyaro ku hawlan falal Amniga lidi ku ah iyagoo gabdhaha dariiqyada u istaaga oo ka furta mobilada.
Taliyaha Saldhiga dhexe dhame Maxamud Muuse ayaa sheegay inay soo qabteen dadka ku hawlan dhaca oo ay ka mid yihiin kuwa ku habsada dhulalka iyo dhalinyarada dhaca u gasyta shacabka.
Dhankiisa Taliyaha Saldhiga Bari Cali Muuse Maxamuud ayaa sheegay inay xiran yihiin dad badan oo loo soo qabtay fowdo amniga ka dhan ah , dhanka kale waxa uu tilmaamay inuu daris la yahay Saldhigu Kaamamka barakacayasha oo waqtiyada habeenkii dad badani isugu yimaadaan markaasna buu sheegay inay ka hawlgalaan sidii lagu xaqiinin lahaa Amaabnkooda.
Hoos ka dhegayso Codadka